आमा कोरोना संक्रमित भएपनि भर्खर जन्मिएका बच्चा संक्रमित नहुनुको यस्तो रहेछ कारण – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आमा कोरोना संक्रमित भएपनि भर्खर जन्मिएका बच्चा संक्रमित नहुनुको यस्तो रहेछ कारण
सूर्यकान्त तिवारी । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसलाई लिएर हरेक दिन नयाँ–नयाँ खुलासा भइरहेको छ । यो बीचमा आमाको दुध पिउने सन्तानलाई लिएर एक नयाँ खुलासा भएको छ । परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि, आमाले सधैं आफ्ना बच्चाहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ ।
यो कोरोना युगमा पनि प्रमाणित भएको छ । आमा महामारीमा पनि बच्चाहरूको लागि कारण बनिरहेको छन् । आमाको दुध एक सुरक्षा कवच रहन्छ । आमा कोरोना सकरात्मक हुनसक्छिन्, तर उनको बच्चामा संक्रमण हुन सकेन । भर्खरै जन्मेको सकारात्मक शिशुले कोरोना संक्रमित आमाको दुध पिउँदा पनि संक्रमण नभएका पनि धेरै घटनाहरु देखा परेका छन् ।
डाक्टरहरूले भने कि आमाको दूध नवजात शिशुको लागि सबै भन्दा राम्रो औषधि हो । यद्यपि कोरोनाको लागि कुनै औषधि बनाइएको छैन । यो आमाको दुधको बल हो जुन नवजात शिशुहरूको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली कोरोना योद्धा साबित भएको छ । आमाको दुधमा हजारौं रोगहरूलाई हराउने क्षमता छ । यद्यपि आमा कोरोना संक्रमित छ तर उनको दूधमा यति शक्ति छ कि बच्चालाई सानो समस्या पनि हुँदैन ।
त्यहाँ कोरोना अवधि को कोरेक्शन आंकडा पनि छन् । कोरोना अवधिमा, २४१ कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाहरूलाई सिभिल र स्मेयर अस्पतालमा पुर्‍याइयो । यी नवजात शिशुहरु मध्ये १३ जना मात्र कोरोना संक्रमित जन्मिएका थिए । प्रोटोकलका अनुसार अन्य नवजात शिशुहरूको परीक्षण गरियो तर उनीहरूमा कोरोनाको कुनै लक्षण फेला परेन र यी बच्चाहरूलाई अहिलेसम्म कुनै समस्या भएको छैन । उही समयमा, २२८ बच्चाहरु कोरोना नकरात्मक पाइए । यस समयमा, कोरोना सकरात्मक आमाको उपचार भइरहेको थियो ।
शिशुले आमाको दुध पिउन जारी राखे, तर कुनै पनि बच्चालाई केही समस्या भएन् । उनलाई केही दिन पछि डिस्चार्ज गरियो । कोरोना अवधिमा सिभिल र स्मेयर अस्पतालमा सात हजार जनाको डेलिभरी गरिएको छ । धेरै बच्चाहरु कोरोनामुक्त छन् । हालसम्म, संक्रमितहरू मध्ये कसैको पनि मृत्यु भएको छैन ।
स्मिमर अस्पतालको भोकल विभागका एचओडी डा. अश्विन वाछानीले भने, ‘हामीले कोरोना अवधिमा ४ हजार प्रसूति गरेका थियौं । यी मध्ये १०३ जना गर्भवती सकारात्मक थिए । जे होस् आमा कोरोना संक्रमित छ, उनले मास्क र अन्य प्रोटोकल अनुसरण गरेर बच्चालाई दुध पिलाउन खुवाउन सक्छिन् ।’
उनले थप्दै भने, ‘कोरोना आमाको दुधले फैलिएको छैन । हो, यदि बच्चाहरू केहि कारणले कोरोना सकरात्मक छन् भने पनि त्यसले उनीहरूलाई असर गर्दैन । तिनीहरू आमाको दुधबाट बञ्चित छन् भन्ने सोच्दै, तिनीहरू अन्य रोगबाट ग्रस्त हुनेछन् र जीवनको लागि सुधार गर्न सक्षम हुनेछन् ।’
सिभिल अस्पतालको भोकल विभागका प्राध्यापक डा. ध्वनि देसाईले बताए, ‘कोरोना अवधिमा हामीहरुले करिब २५० कोभिड–१९ भर्ती गर्भधारण गरेका छौं । जसमा १३८ भन्दा बढी डेलिभरी भएको छ । केवल ८ बच्चाहरु कोरोना पोजेटिभ पाइए । यी बच्चाहरूलाई कोरोनाको कुनै लक्षण भेटिएन । बच्चाको रोग प्रतिरोधक क्षमता आमाको दूधको कारण धेरै बलियो छ । यसले सबै आवश्यक पोषक तत्व र भिटामिनहरू समावेश गर्दछ । आमाको दूधले नवजात शिशुको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्दछ । यसले प्रत्येक रोगबाट बचाउँछ